Displaying 141 - 150 of 1276
ဥရောပသမဂ္ဂမှ မြန်မာနိုင်ငံ၏ပညာရေးကဏ္ဍ အား ယူရိုငွေ ၂၂၁သန်း ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခြင်း
၂၀၁၉ခုနှစ်၊ မတ်လ၂၁ရက်နေ့တငွ် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဥရောပသမဂ္ဂသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး Mr.
Statement on the further escalation of violence in Rakhine State
Continued violence in Rakhine and southern Chin States between the Arakan Army and the Myanmar military is causing the loss of lives andaworsening humanitarian situation. Attacks against police posts and civilian authorities and individuals must stop.
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် အကြမ်းဖက်မှုများ ပိုမိုမြင့်တက်လာသည့်အပေါ် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဥရောပသမဂ္ဂသံရုံး ၊ ဥရောပအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ သံရုံးများ ၊ ကနေဒါ နှင့် နော်ဝေ သံရုံးတို့မှ သံရုံး အကြီးအကဲများသည် အောက်ပါ သတင်း ထုတ်ပြန်ချက် တစ်ရပ် ကို ပြုလုပ်လိုက်သည် ။
Illegal wildlife trade emerges asamajor threat to more than 1000 plant and animal species.